सुशान्तको नो’टमा कृतिको नाम, के ले’खेका रहेछन्… – सडक मिडिया
सुशान्तको नो’टमा कृतिको नाम, के ले’खेका रहेछन्…
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंहको नि’धन भ’एको तीन महिना बढी बि’तिसकेको छ। सुशान्तले आ’त्मह’त्या ग’रेका हुन् अथवा उ’नको ह’त्या भ’एको हो? यही प’त्ता लगाउन ठू’लाठूला ए’जेन्सीहरू ख’टिएका छन्। तर लगातार के’समा नयाँ नयाँ मो’डहरू आ’इदिनाले के’सको स’मीकरण नै ब’दलिँदो छ।
यसैबीच भारतीय मिडिया आज तकका अनुसार, सुशान्तको फार्म हाउसबाट उनको प’र्सनल नो’ट फे’ला परेको छ। जुन नोट सुशान्तले २०१८ मा आफैले लेखेका थिए। अप्रिल २०१८ मा ले’खिएको यो नोटले सुशान्तको जिन्दगीमा लु’केर रहेका धेरै र’हस्यहरूबाट प’र्दा उ’ठाउने काम गर्न सक्छ।
त्यो समय २०१८ मा सुशान्त र रिया चक्रवर्तीको अझै भेट भएको थिएन। यस्तोमा रिया सुशान्तको जिन्दगीमा आ’उनुभन्दा पहिले सुशान्तको जिन्दगी कस्तो थियो? यो म’हत्त्वपूर्ण कुरा हो। नोटमा सुशान्तले धेरै स’कारात्मक कुराहरू ले’खेको भे’टियो। त्यतिबेला सुशान्त धू’मपान छो’ड्न चा’हन्थे। उनलाई आफ्नो आगामी फिल्म `केदारनाथ´ को स्क्रिप्ट पढ्नु थियो। सुशान्तले आफ्नो धेरै समय नायिका कृति सेननसँग बि’ताउन चा’हेको कु’रा नो’टमा उ’ल्लेख गरेका छन्।
कृति र सुशान्तले २०१७ मा `राबता´ फिल्ममा सँगै काम गरेका थिए। फिल्म फ्ल’प रह्यो। तर सुशान्त र कृतिको जोडीलाई दर्शकहरूले औधी रुचाए। धेरै ठाउँमा कृति र सुशान्तलाई सँगै देख्दा उनीहरूले एक अर्कालाई डे’ट ग’रिरहेको खबर पनि बा’हिरियो। तर सुशान्त र कृति दुबैले आफूहरूको प्रेम कहिल्यै स्वी’कार गरेनन्। सुशान्तको मृ’त्युपछि दु’खी बनेकी कृतिले सुशान्तको न्या’यका लागि आ’वाज उ’ठाइरहेकी छन्।
कति जनाले पढें ? 7,689
Tagged सुशान्त सिंह राजपुत
Previous Post: यस्ताे छ नेपाली रेल, ८ तस्विर हेर्नुहोस्
Next Post: हराएको फोन भेटिँदा बाँदरले खिचेका सेल्फी र भिडिओ फेला
मजदुरी गरेर हुर्काएको छोराकाे ह’त्या , उजाडियो आमाको सपना 1,467 views